Factory Crate Pet - Mpanamboatra Pet Crate Pet, Mpamatsy
Varavarana vy mihidy vy matevina avo roa heny
Detail Double-Door Metal Foldable Large Heavy Duty Pet Crate dia endrika tsy miovaova, mahatonga ny tranony ho tsotra ny manangana sy midina. Izy io dia vita amin'ny harato vy matanjaka sy maharitra, ny vovoka mainty dia manome endrika tsara tarehy. Ny fitanana azo esorina dia manamora ny fitondrana azy, ary ampiarahina amin'ny lovia plastika hitazonana ny hadionan'ny biby fiompinao. Famaritana anaran'ny vokatra famolavolana alika saka saka alika vy vita amin'ny vy, fampiasana vy vita amin'ny vy tsara ho an'ny biby, toy ny alika, osy ary akoho Type P ...
Namboarina manokana 42 "48" kennel biby fiompy indroa varavarana biby tranom-borona vy vala alika
Drafitra Double-Door Metal Foldable Large Heavy Duty Pet Crate dia mamorona toerana azo antoka ho an'ny biby fiompinao raha mbola tsy eo ianao ary manome ho an'ny voajanaharin'ny alika ”. Famolavolana malefaka izy io, mahatonga ny tranom-borona ho tsotra hananganana sy hakana azy. Izy io dia vita amin'ny harato vy matanjaka sy maharitra, ny vovoka mainty dia manome endrika tsara tarehy. Ny tahony azo esorina dia manamora ny fitondrana azy, ary ampiarahina amin'ny lozika plastika hitazonana ny hadionan'ny biby fiompinao. Famaritana ny anaran'ny vokatra Foldi ...
Fivarotana maoderina namboarina namboarina habe azo ahodin-tànana fanampiny alika Kennel ivelan'ny trano tranom-borona amidy
Ny endri-javatra azo antoka - Ny sisiny boribory sy ny fonony azo antoka dia miaro ny biby fiompy. -Mora ampiasaina, aforeto amin'ny fisorohana mety, mora apetraka. (Tsy mila fitaovana) -Ny anatiny sy ny ivelany, ny tariby mifono mifono manohitra ny harafesina. -Natao tamin'ny vy mahery vaika sy mateza izy io, ny fonosana vovoka mainty dia mahatonga azy ho tsara bika. -Ny fametahana azo ahamora dia mora entina, ary ampiarahina amin'ny lovia plastika hitazonana ny hadionan'ny biby fiompinao. Famaritana anaran'ny vokatra famolavolana alika saka Dog Dog Kennel Material Metal, vy vy ...